Chongqing, Shina, Izay Hihaona Ankizivavy Iray Mans Travel
Chongqing ao Shina fotsiny hafa tanàna lehibe, izay mety tsy mbola nandre ny taloha, na dia nandeha tany na izany aza dia tena tsara toerana mba hahazatra ny amin’ny mafana Aziatika ny vehivavy toy izany dia fantatra ho toy ny lalana tsy nandeha ho an-tapitrisany maro ireo vahiny tsy mandalo eto tahaka ny toerana hafa ao Bangkok, Pattaya ary na dia Manila. Ity lahatsoratra ity dia manambatra sady maimaim-poana ny firaisana ara-nofo sy ny fivoriana ny ankizivavy tao Chongqing ary koa ny karama ho an’ny firaisana ara-nofo rehefa tsy misy ny lehibe ny fivarotan-tena hooker toe-javatra eto. Mazava ho azy fa, amin’ny fahafantarana ny fomba miteny Sinoa no hanampy anao be, fa afaka mahazo ny amin’ny tanana famantarana sy ny maro ao an-toerana no somary namana, mba afaka mahazo ny tsy mahalala na inona na inona mihitsy. Angamba afaka mandeha ao amin’ny YouTube sy hianatra ny sasany amin’ireo teny fototra, dia tsy ho lasa mahay tsara noho ny s sarotra toy izany ny teny ny mianatra ho an’ny ankamaroan’ireo Tandrefana, ary indrindra ny zazavavy tsy miteny malagasy tsara mihitsy. Ianao no tena te-download ny WeChat ny fampiharana amin’ny finday alohan’ny tonga noho ny s ny tena nandefa hafatra fampiharana na mety hookup fampiharana, saika ny rehetra ny vahoaka Shinoa no mampiasa ny WeChat mifandray fa tsy mitaky na Skype na zavatra hafa. Maninona, ahoana ny fomba ianao dia afaka mahita ireo mpivaro-tena ao Chongqing ho an’ny firaisana ara-nofo alohan’ny mahazo ny manodidina mba maka maimaim-poana iray ny ankizivavy. Misy dia tsy betsaka ny vola ho mitana ny firaisana ara-nofo toerana ao Chongqing ny tenany na izany aza dia misy manerana ny tanàna. Ireo bahoaka amin’ny aterineto, na mahazo tsara fantatra amin’ny ankapobeny hahazo nanao bemidina ary nisava tany, ary nakatona ny polisy ka tsy misy tsy ho be dia be ny malaza vaovao avy any ho anareo mba hahita. Misy be dia be ny fanorana misafidiana sy sauna manodidina izay afaka mahazo ny lahatsoratra miresaka vetaveta miboridana otra sy ny asa tanana, angamba na blowjob, ary ireo dia ny toerana tsara indrindra mba hitady. Indraindray raha ny vehivavy tia anao, ny firaisana ara-nofo dia ho eo amin’ny karatra koa. Jereo fa manaitaitra fanorana misafidiana mena na mavokely jiro avy amin’ny anoloan’ny fidirana.
Misy be dia be ny Aziatika KTV s ao Chongqing izay afaka manana firaisana ara-nofo, nefa ireny dia mety ho tena lafo sy tsy tsara noho ny voalohany timers izay tsy afaka miteny ny fiteny ao an-toerana.
Dia ho scammed saika isaky ny fotoana
Azonao atao ihany koa ny miezaka mba hihaona hookers an-tserasera ao amin’ny WeChat na ny hafa mampiaraka apps. Misy ny safidy mba hahita sy hiresaka olona tena akaiky manodidina ary afaka manome fa ny miezaka, dia matetika miasa mba hihaona vaovao tokan-tena ny vehivavy. Na fotsiny hanao izay asa tsara indrindra tany amin’ny tanàna izay tiany sy izay mba hitsambikina ao ny taxi ary angataho izy ireo mba hitondra anao amin’ny toerana iray ho an’ny firaisana ara-nofo, izy ireo dia mahalala foana izay mba handeha sy hitondra anao mivantana ny varavarana fidirana. Miezaka hahita ny mpila ravinahitra, na ny mpamily fiarakaretsaka ary anontanio azy ireo ny toerana ahitana ankizivavy, ny firaisana ara-nofo, na ny otra ao Chongqing. Tsy miteny Shinoa dia manao fivoriana iray ny ankizivavy ao Chongqing tena mafy kokoa noho ny toerana hafa. Fa satria tsy maro ny mpizaha tany lavitra amin’ny alalan’ny lehibe ity tanàna, manana hafakely tafahoatra amin’ny lafin-javatra izay tsy misy mponina ao an-toerana. Rehefa mivoaka ny trano fisotroana na fikambanana na ny toeram-pivarotana lehibe iray fa dia tsy ho vitsy ny olona mavitrika mibanjina anao rehefa mandeha lasa. Afaka miezaka sy hiresaka amin’izy ireo, hitako ny mangataka ny toro-lalana na mangataka fantatrao ve izay eny an-dalana io na ny toerana na dia fantatrao izay, izay mahazo ny tongony ao am-baravarana. Miezaka mba hihaona ankizivavy ao ny andro, dia ho ratsy indrindra, dia afaka lohan’ny ny toeram-pivarotana lehibe toy ny tanan-dehibe amin’ny Plaza, Jiabao toeram-Pivarotana lehibe, na Wanda Plaza fa ny mileage mety tsy hitovy toy ny tahan’ny fahombiazana eto. The nightlife no be mora kokoa satria farafaharatsiny tsy tafiditra ny toaka sy ny ankamaroan’ny ankizivavy no niala noho ny fotoana tsara sy very ny menatra mihitsy. Ankehitriny, ny vehivavy dia tsy ho sahiran-tsaina, afaka na dia miezaka sy ny dihy niaraka taminy, na dia ho toy ny maro, ny mandihy dia fa hafahafa raha tsy mahafantatra ny fomba hanaovana izany. Tsara ny sasany nightlife safidy dia Citi Park, Harpa Irlandey pub, ny any Ambanin’ny tany Arcade ao Jinbei, Tsy misy, Soho, koa misy be dia be ny trano fisotroana teo amin’ny riverside faritra ao amin’ny Nan ‘ny distrika. Rehefa ny olona mianatra fiteny vahiny, dia ny ankamaroany dia atao amin’ny alalan’ny taratasy. Izy ireo dia mamaky ny manoratra fa tsy matetika ny fomba fanao miteny. Ka midika izany fa izy ireo raha ny marina dia afaka mahalala zavatra maro teny midika fa tsy amin’ny rehetra ny aina miezaka raha ny marina milaza azy. Raha nandeha niakatra ho any ny tovovavy tahaka izany teo amin’ny fitsarana, izy dia mahazo flustered ary namely anao eny. Fa raha handefa hafatra ao Shina, Tia ny zazavavy iray izay mahafantatra ny sasany amin’ny teny anglisy ianao dia tsy maintsy betsaka kokoa ny tifitra. Izy no sonia ny toerana, satria izy te-hihaona vaovao ry zalahy, ary manantena fa vaovao lehilahy ianao. Iray amin’ireo zavatra tsara fa ireo ao Chongqing, ny ankizivavy dia mahafantatra fa raha izy ireo handeha miaraka aminao ny olona rehetra dia mibanjina azy. Midika izany fa mety hisokatra ho manana ny daty voalohany ao an-trano na trano fandraisam-bahiny, ka tsy manana ny tahony avokoa ny tarehiny. Raha izany no tanjona, dia ho azo antoka ny boky amin’ny efitrano iray eny Airbnb. Toa be ny tsy mampatahotra mba hanasa ny ankizivavy ny an-trano fa tsy ny efitra fandraisam-bahiny. Misy be dia be ny fivarotan-tena safidy eto, tsy be olona. Raha toa ianao lohany ny fanorana misafidiana sy sauna dia azo antoka fa hahita ny sasany. Plus, hookers dia mavitrika ao amin’ny WeChat raha toa izy ireo eo amin’ny toerana amin’izao fotoana izao ianao, dia azo antoka fa hahita azy ireo. Fa ny fomba tsara kokoa ny hihaona ny ankizivavy ao Chongqing no online mampiaraka toerana toa an’i Shina ny Fitiavana. Izany no malaza indrindra ao amin’ny firenena dia tokony hanana ny tena misy ankizivavy iray
← Chatroulette Ankizivavy: Ahoana no mba Hiresaka amin'ny ankizivavy eo amin'ny Chat roulette
Video Mampiaraka Shina Lahatsary Mampiaraka Kisendrasendra Hiresaka amin'ny Firenena →